အိုးဝေ: July 2008
Posted by ဇနိ at 2:17 AM Links to this post 14 comments
အခုစာရေးဆရာ Фазиль Искандер(ဖာဇီ(လ်) အီစကန်ဂျယ်) က Abkhazia တွင် ၆၊မတ်လ၊၁၉၂၉ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာတပုဒ်ကို ကျောင်းသင်ခန်းစာမှ သင်ခဲ့ဖူးလို့ အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာလိုက်တော့ အခုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ အတိုတပုဒ်နဲ့အတူ သူရဲ့အခြားစာတွေလည်းကိုပါ တွေ့ပါတယ်။ အခြားစာတွေကိုလည်း နောက်အလျင်းသင့်ရင်လည်း ဘာသာပြန်ပါဦးမယ်။ သူဟာ စာပေဆုများစွာရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မော်စကိုမှာ နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်လို ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဂျာမန်ရှေးဟောင်းမြို့လေးတစ်မြို့။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်ပါတဲ့ ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်ကလေးကို ညမိုးချုပ်နောက်ကျပြီး ပြန်လာကြတယ်။ လမ်းမကို ဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့ မီးပွိုင့်က အနီရောင်ပြနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လမ်းမပေါ်မှာ မောင်းနေတဲ့ကားမှ မရှိတော့ လမ်းကို ဖြတ်ကူးကြမယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့တွေက လမ်းကူးဖို့လုပ်တော့ ဂျာမန်တချို့ဆီက လမ်းကူးမှာကို မကြိုက်တဲ့အသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ လူသွားလမ်းပေါ်မှာ မီးစိမ်းကို ရပ်စောင့်နေပါတယ်။ ကားတစီးမှမရှိဘဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး စောင့်နေပါတယ်။
အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဟိုးအနိမ့်ဆုံးမှာရှိနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးအဆင့်အတန်းမှာ ရှိနေတာလား။ ဒါက နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတွေကြားက ဖွင့်ပြောမထားတဲ့ အများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်လိုမျိုး မဟုတ်ပေဘူးလား။
ပြည်သူတွေက မလိုက်နာပေမယ့် နိုင်ငံတော်က လိုက်ပြီးဖြည့်စည်းပေးရမဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်က စောင့်မကြည့်ပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေက လိုက်နာဖြည့်စည်းရမယ့် ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်။
ပြည်ကြီးသားပီသတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဆေးလိပ်အစီခံကို ပြာခံအမှိုက်ပုံးဆီကို သယ်သွားတာပါ။ နိုင်ငံတော့်အလုပ်ကတော့ သိပ်မကွာဝေးလှတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ပြာခံအမှိုက်ပုံးတွေ ထားပေးရမှာ မဟုတ်လား။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မှ ပြည်သူတစ်ယောက်က သူ့ပုဂ္ဂလိက အကျိုးအတွက် ရဲတွေစောင့်မနေတောင် ကိုယ့်ရဲ့သောက်ပြီးသား စီးကရက် ဖင်စီခံကို ပြာခံအမှိုက်ပုံးဆီကို သယ်သွားတတ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဆိုတာကတော့ လမ်းမပေါ်ရဲတွေ ချထားတာထက် ပြာခံအမှိုက်ပုံးတွေ ပိုပြီးချထားပေးမယ်လို့ သဘောရပါတယ်။ အဲဒါမှသာ အကျိုးများစေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ လက်တွေ့အလုပ်ပါ။
အဲဒါက ဘယ်လို စဖြစ်လာမှာလဲဆိုရင် အထက်ကနေ အောက်ကို၊ အောက်ကနေ အထက်ကို ဆိုသလို တချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုအဖြစ် စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ သိပ်တော့ မသေချာပါဘူး။ မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ ဥပမာတခုပြောကြည့်မယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ အားလုံးအတွက် မြင်သာထင်သာအရှိဆုံးတခုကတော့ (ဂရုတစိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါ့ပျက်ပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို ရှုမြင်ကြလိမ့်မယ်။) နိုင်ငံတော် အာဏာပါပဲ။ ပြည်သူတွေက အာဏာကိုရှုမြင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကို ဘာတွေပြန်ပြောဖြစ်သလဲဆိုတော့ - "ဟေ့ ကြည့်စမ်း မခိုးကြဘူး။ ဟေ့ ကြည့်စမ်း မလိမ်ညာကြဘူး။ ကြည့်စမ်း မနေ့က မှားခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့မှာ (နောက်နှစ်မှ မဟုတ်ဘူး) မနေ့က မှားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံမယ်။ ကိုယ့်ဆေးလိပ်ဖင်စီခံကို ပြာခံအမှိုက်ပုံဆီကို သယ်သွားကြရော။"
မူရင်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at 12:53 AM Links to this post9comments
Posted by မိုက်တူး at 9:09 PM Links to this post 10 comments
သူငယ်ချင်း ကိုလူအေးက တဆင့်ပေးပို့လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခံစားပေးခဲ့မိတာ ရင်နဲ့ မဆံ့အောင်ပဲ
Posted by ဇနိ at 11:48 AM Links to this post5comments
ဝါတွင်း ဥပုဒ် တစ်ရက် က မိုးဦးကျ၏ နံနက်ခင်းသည် ရွက်နုစိမ်းတို့ဖြင့် မြရောင် သန်းနေသည်။ ကျောင်းအ၀င်ဝရှိ ဖွားဘက် တော်ပင်ကြီးသည် တစ်ပင်လုံး အပွင့်များဖြင့် ကျွန်မကိုဆီးကြိုနေသည်။ မုဒ်ဦး၌ တရုတ်စံကား ပွင့်များမှာ ပွင့်တစ်ချို့၊ ကြွေတစ်ချို့။
ပန်းစိုက်ခင်း အနီးမှ ဖြတ်လျှောက်လာတော့ စံပယ်ပွင့် လက်ကျန် တစ်ချို့က ဖြူဖွေးစွာ ပွင့်လျက် ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရ၏။ လက်ဆွဲခြင်းထဲမှ ဆွမ်းချိုင့်၊ ထမင်းချိုင့်၊ စပျစ်သီးအချို့နှင့် လက်ဖက်အုပ်တို့၏ အလေးချိန်က မသေးသော်လည်း ပေါ့ပါးသောစိတ်ကြောင့် ခြေလှမ်းတို့က သွက်၏။
စာချဆောင်၊ စာသင်ဆောင်၊ ဆွမ်းစားဆောင်များကို ဖြတ်ကျော် မိတော့
“အေးအေး တကယ်စောင့်ဖြစ်တယ်နော် ဝမ်းသာလိုက်တာ ”ဆိုသော အသံက အရင် ပေါ်လာပြီးမှ ဇလပ်ပန်းရုံများကြားက ထွက်လာသော မလတ်ကိုတွေ့ရ၏။ ကျွန်မမှာ မလတ်ကိုတွေ့လျင် မဖေါ်ပြနိုင်အောင် ဝမ်းသာလှသဖြင့် ဘာမှမပြောနိုင်ပဲရှိ၏။ မေမေ၏ “ငါ့သမီး အဖေါ်မင်ပုံများ ဥပုဒ်စောင့်တာတောင် အဖေါ်စောင့်တဲ့ကျောင်းမှ စောင့်မတဲ့အေ။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ”ဆိုသောအသံကို ပြန်ကြားမိသေး၏။
“မလုပ်ပါနဲ့မလတ် ”ကျွန်မအပြော နှေးနှေးရှေ့တွင် ခြင်းက မလတ်လက်မှာ ရောက်နှင့်၏။
“မလတ် ဘယ်အချိန်က ရောက်နေလဲ”
“အင်း နာရီဝက် လောက်တော့ရှိပြီ။ မန်ကျီးရွက်သုပ် ကမ်းဖို့ လုပ်လာတာလေ၊ မြေပဲဆန်ထောင်းက သပ်သပ် ပလပ်စတစ်နဲ့ ထုပ်ယူလာပြီး ဥပုဒ်သည်တွေ ရောက်ခါနီးမှ ရောမွှေပြီး သုတ်ရမှာမို့ စောထွက်ခဲ့တာ”
မလတ်က မန်ကျီးရွက်သုတ် ကမ်းမည် ဆိုပါလား။ ကျောင်းပေါ် ရောက်တော့ မလတ်၏ မန်ကျည်းရွက်သုပ် စတီးဇလုံကြီးကို တွေ့ရ၏။ အချဉ်သတ်ထားသော မန်ကျည်းရွက်များကို ပဲမှုန့် ၊ကြက်သွန်နီ ပါးပါး၊ မြေပဲဆံထောင်းတွင် ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် လောင်းကာ သုပ်ထားသည်မှာ မြင်ရုံနှင့် စားချင်ဘွယ် ရှိလှ၏။ ကျွန်မက နောက်ဥပုဒ် ချိုချဉ်ကမ်းမည်ဟု တေးထားလိုက်၏။ အသုပ်တွေဘာတွေဆို သူများက ကူပေးပါမလား စိုးရိမ်နေရဦးမည်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် သုပ်လျင်တော့ သီလပေးချိန်ရောက်တောင် အဆင်ပြေပြေ ပြီးနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ကျွန်မကို ရန်သူလို ဆက်ဆံမည့် မီးဖိုခန်းက ဆားနှင့်ဓား ကိုလည်း ရင်ဆိုင် နေရဦးမည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တောရ ကျောင်းဖြစ်ရာ မြို့နှင့်ရော ရွာများနှင့်ပါ အတော် လှမ်းသဖြင့် သီလပေးချိန်က ၉နာရီခွဲ သတ်မှတ် ထားသော်လည်း ၈နာရီခွဲ လောက်မှစ၍ သီလယူမည့် သူများ တဖွဲဖွဲ ရောက်ရှိလာ၏။ ကျွန်မကို မလတ်က မန်ကျီးရွက်သုပ် ကမ်းပေးရန် တာဝန်ပေးရာ ပျော်လှသည်။ ဆေးလိပ် ကုသိုလ်ရှင်မှာ လူခွဲမရှိသောကြောင့် သီလယူခါနီးမှ လာနိုင်မည်ဖြစ်ရာ မလတ်က ဆေးလိပ် ကမ်းပေးနေရ၏။ အခြား လက်ဖက်သုတ်ကမ်းသူ၊ ဖျော်ရေဗူးကမ်းသူ၊ ယပ်တောင်ကမ်းသူ၊ ရှုဆေးဗူးကမ်းသူ၊ ကိုးလုံးပုတီးကမ်းသူ စသည်ဖြင့် ကျောင်းအပေါ်ထပ် တံခါးအဝင်တွင် နိဗ္ဗာန်ဈေး ခင်းလျက် ရှိလေ၏။
နိဗ္ဗာန်ဈေးသူ များမှာလည်း ဝတ်ကောင်း စားလှများနှင့် သနပ်ခါး ခြေစွန်း ခေါင်းစွန်းလိမ်းကာ အလှ ကျက်သရေ ပွင့်လန်းလျက်ရှိ၏။ အချို့ မိန်းကလေးများမှာ အိမ်က ဥပုဒ်ကျောင်း အတင်းလွှတ်၍ မတတ်သာလို့ ထွက်လာရသော်လည်း တစ်နေကုန် မီးလာ၍ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် ကောင်းတတ်သော ဝါတွင်း ဥပုဒ်နေ့တွင် ဂျီတော့ခွင့် မရတော့၍ မှိုင်တွေချနေ၏။
၉နာရီ၂၀တွင် လူစုံပြီဖြစ်ရာ ဂေါပကကြီးမှ ဘုန်းကြီး ကြွလာတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး၏ အသံကို လွှမ်းသွားအောင် ဆော်သြလိုက်ရာ ဥပုဒ်သည်တို့ နေရာယူကာ ငြိမ်သက် သွားလေ၏။ ဘုန်းဘုန်းကြီး ကြွလာပြီး တရားပလ္လင်တွင် နေရာယူ၏။ ဂေါပကကြီးမှ “ဘုရားအမြတ်ဆုံး ရတနာ၊ တရားအမြတ်ဆုံး ရတနာ၊ သံဃာ အမြတ်ဆုံးရတနာ၊ ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ရိုသေ ကြည်ညိုစွာဖြင့် ကန်တော့ကြပါစို့ ခင်ဗျား..” စလိုက်သည်နှင့် ကန်တော့ချိုးကို ညီညီရွတ်ဆို ကန်တော့ကြရ၏။
ရှစ်ပါးသော သီလတော်မြတ်ကို ခံယူဆောက်တည်ခြင်း ဘုန်းဘုန်းကြီးမှ သီလအကျိုး ဘာဝနာအကျိုး တို့ကိုဟောပြောခြင်းတို့ကို ကောင်းစွာမှတ်သား နာယူခြင်း ပြုကြလေ၏။
၁၀နာရီခွဲတွင် သီလယူပြီး၏။ ဘုန်းကြီးအား အသီးသီး ဆွမ်းချိုင့်များ ကပ်လှူကြ၏။ ပြီးလျင် မိမိတို့အုပ်စုအလိုက် ဇရပ်များပေါ်တွင် ထမင်းစားရန် ပြင်ဆင်ကြ၏။ ပြင်ဆင်ကြသည် ဟု ဆိုရာတွင် အားသွားသော လှူဖွယ် လင်ဗန်းထဲသို့ ထမင်းများကို သွန်ထည့်ပြီး ချိုင့်များ၊ ချိုင့်ဖုံးများကို ထမင်းစား ပန်ကန် သဖွယ် အသုံးပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကလေး ပါသောဝိုင်းများဆီမှ တီတီတာတာ အသံများလည်း ကြားနေရ၏။
အေးအေးတို့ ဝိုင်းတွင် အန်တီချင်း၊ အမေစု၊အမေရှိန်( အန်တီချင်းအမေ)၊ အမေကြီးရွှေ ၊မလတ်၊ ဖိုးတင့်(မလတ်နှင့် ဝါကျွတ်လျင် လပ်ထပ်တော့မည့်လူ)၊ ခိုင်ခိုင်၊ မသင်းတို့ ပါဝင်၏။ အမေစုတို့ လူကြီးများကို မြေးဖြစ်သူဖိုးတင့်က လှည်းမောင်းပို့ရင်း ကျောင်းသို့ ပါလာခြင်းဖြစ်၏။
“ကဲ လူကြီးတွေကို ဦးချပြီးပြီ စားကြစို့” အန်တီချင်းက လူကြီးများကို တစ်ဇွန်းစီ ဦးချပြီးနောက် စ စားကြသည်။
“အမေကြီးရွှေ သမီးကြက်သားရေချိုချက်လေး စားပါဦး မှီရဲ့လား၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အိမ်ကြက်လေး အရမ်းအားရှိမှာ …အင့်”
“အင့်” ဆိုသည်မှာ အမေကြီးရွှေကို ဟင်းထည့်ပေးခြင်း မဟုတ်။ ခိုင်ခိုင်က တံတောင်နှင့် တွက်လိုက်သဖြင့် မသင်း ထမင်းလုပ် လွတ်ကျသွားခြင်း ဖြစ်၏။ “ဥပုဒ်သည်နော်” ဟု ကြိတ်ပြီး မာန်လိုက်သံကိုလည်း ကြားလိုက်ရ၏။
ပဲဟင်း တစ်ဇွန်းကို ရှုးကနဲ သောက်လိုက်ရင်း နားလေးသော အမေစုက အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဆိုရာ
“အံမယ်လေး သူ့သမီး အပျိုကြီး ဝါမဝင်ခင် သူတို့ အနောက်တောက ယာ ကို အခစား လုပ်ပေးနေတဲ့ ငသိန်းနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားတာကို မကြားဘူးလား အရီးရယ်”
ကျွန်မတို့ပြောလျင် ဒါလားဥပုဉ်သည်ဟု မပြောသော်လည်း အကြည့်လေးနှင့် အပစ်ပေးတတ်သော အန်တီချင်းက ရောင်းသူဝယ်သူ အသံတူစွာ အမေစု လေသံအတိုင်း ဖြေလိုက်၏။
“အင်း ..ဒါမျိုးပေါ့ သားသမီးယုံ စုံလုံးကန်း ဆိုတာ”
အမေရှိန်က အစားနည်းသည် ဖြစ်ရာ လက်ဆေးရင်း တရားသံ ကျကျဆို၏။
ကျွန်မနှင့်ခိုင်ခိုင်က ထမင်းစားပြီးသည်နှင့် အချိုပွဲပြင်သည်။ လက်ဖက်သုတ်၊ ဧလမုန့်၊ စပျစ်သီး၊ ကိတ်မုန့်၊ သရက်သီးမှည့်၊ ငှက်ပျောပေါင်း စသည်ဖြင့် စုံလင်လှသည်။ ခိုင်ခိုင်က ငှက်ပျောသီးပေါင်း လုပ်ပုံကို ကျွန်မအား ရှင်းပြနေသည်။ ယခု ငှက်ပျောပေါင်း သူ့လက်ရာ ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။
“နင်ရော ဘာမုန့်တွေ လုပ်တတ်လဲ”
“ပလာတာ” ဟုကျွန်မက ပြောချင်သော်လည်း သီလနည်းနည်းများ ကျိုးသွားမလား စိုးရိမ်ကာ ခေါင်းပဲ ယမ်းပြ လိုက်ရ၏။
မလတ်နှင့် ဖိုးတင့်က အုတ်ရေကန်ဆီ ချိုင့်ဆေး သွားကြသည်။
“ကဲ အရီးတို့ အချိုပွဲလေး စားလိုက်ကြဦး”
မလတ်တို့ ပြန်ရောက်လာတော့ အားလုံဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ကြရင်း ဟိုဟာနည်းနည်း ဒီဟာနည်းနည်း စားရင်း လူကြီးတွေ စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြ၏။ အမေညိုနှင့် ဒေါ်ကြီး ခင်လေးတို့ ကူးလာပြီးမှ စကားဝိုင်းသည် ပိုစည်လာ၏။
“ ပုတ်မဂျီနေ့က ဘကြီးဦး ပြောတော့ မိုးနှောင်း ကောင်းမယ် ဆိုပဲ၊ ဒီနှစ် ကြက်သွန် လုပ်မယ် စိတ်ကူးကာမှ တူးချိန် မိုးနဲ့တွေ့မှာ စိုးရိမ်နေရတာ။ ဒီကြက်သွန်နဲ့ ဒို့တောင်သူတွေ တစ်ဒုက္ခတော်”
“အိုအေ ဈေးကောင်းတဲ့နှစ်လဲ ဒို့လက်ထဲ မရှိတော့မှ ဈေးတွေကတက်လာတာပါ ငါတော့ ကိုယ့်ဂျုံကို စိတ်အေးအေး လုပ်ချင်တာ အိမ်ကလူကြီးကို ပြောမရလို့”
“လမ်းလေး ဘာလေး အဖွင့်အပိတ်လဲ နားစွင့်ကြဦး အိန်ဒဒိယလိုင်း ဖွင့်ရင်လဲ ကုလားပဲ ပဲစဉ်းငုံ ဈေးကောင်းပါသအေ့ ငါတို့ကတော့ မမှု့ရတဲ့ ပဲစဉ်းငုံနဲ့ အကျိုးပေးလှပေါ့”
အမေကြီးရွှေက သနပ်ဖက်လိပ်ဖွာရင်း သူ့ပဲစိမ်းငုံခင်းကြီးကို ကျေနပ်ပြောပြောလေ၏။
“အရီးရွှေ တမြန်နှစ်က ပဲစိမ်းငုံတွေ ပွင့်ဖူးဆင်နေတုန်း မိုးကြီးခါလိုက်လို့ ပြီးပါရောလား။ အကုန်သင်းပစ်ပြီး ပြောင်းထိုးလိုက်ရတာ ကိုအေးသောင် နမိတွဲလေး ယာထွက်ပြောင်းတောင် မစားလိုက်ရဘူး သားသတ်သည်နောက် ပါသွားတာ”
“အန်တီချင်း ပဲစိမ်းငုံမရတာနဲ့ ဘာလို့ နမိတွဲလေး အသတ်သည်ဆီ ပါသွားတာတုန်း သမီးဖြင့် နားမလည်ပေါင်”
ခိုင်ခိုင် မေးလိုက်သော မေခွန်းကို ကျွန်မလည်း မေးလို၏။
“ပြောင်းထိုးဖို့ ပဲစိမ်းငုံတွေခုတ်ကြရင်း သူ့မိန်းမပိုးထိတာ ညည်းတို့ မသိကြဘူးလား”
“သိတယ်လေ သမီးတို့တောင် သွာမေးသေးတယ်”
“အေး အဲဒါပဲ ဆေးရုံကြီးက မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထိုးဖို့ ဝယ်ခိုင်းတော့လေ ငွေရှာတာ။ ပဲစိမ်းငုံခင်းထိုးပြစရာ မရှိတော့ ပွဲစား ဆိုတာကလည်း ဘယ်လောက်ငို ပြောတော့ တစ်ကျပ်တောင် ထွက်မလာဘူး။ နောက်ဆုံး အရေးကြီး လွန်းတော့ အချိန်မဆွဲနိုင်လို့ လွယ်ရာ သားသတ်သည်ဆီ နွားမကြီး ထိုးအပ်လိုက်တာ၊ မြွေပူရာ ကင်းမှောင့် ဆိုသလို နကလေးက ချောတော့ မိတွဲလုံးရောင်းမှလို့ မူနေတဲ့ နေဒူးကုလားကို မတန်တဆဈေးနဲ့ ပေးလိုက်ရတာ ပါလား။ အဲဒါ ပဲစဉ်းငုံပဲ အရီးရွှေရေ…..”
“လက်စသတ်တော့ မိုးက စကား ပြောတာပါအေ။ မိုးနဲ့လုပ်စားရတဲ့ တောင်သူတွေ မိုးလေမမှန်ရင် မမောပေမဲ့ ပင်ပန်းကြရှာတယ်”
“အစိုးရနဲ့လဲ ဆိုင်ပါသော်ကော မယ်ညိုရယ်”
“မိုးလေဝသကို ပြောတာလား အရီး”
“ဆိုဝံ့ပေါင် မရယ် အင်စပက်လိုင်း အချိန်ကောင်း ဖွင့်ပေးဖို့ အရေးကြီးတာကို ပြောတာပါ”
ဖိုးတင့်က သူ့အမေကြီးစကားကို တိုးတိုးဖြေရှင်းပေးသည်။
“ဒို့ရွာမှာ စပါးလေး၊ မိုးနှမ်းလေး အဆင်ပြေမှ ဝါတွင်းမယ် ထမင်းတစ်နပ် ဖြောင့်ဖြောင့်စားနိုင်မဲ့ လူတွေ အများကြီးနော”
မသင်းက လူကြီးစကားဆို၏။ မှန်သည်။ ကိုယ့်အခင်းကောင်းမှ တောင်သူငွေလိုချိန်တွင် ကုန်သည်ပွဲစားက ငွေထုတ်ပေးသည်။ တောင်သူလက်ထဲ ငွေရောက်မှ လက်လုပ်လက်စား အခစားတို့ လုပ်အားခ ရသည်။ တစ်ရွာတွင် သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာ ရှိသော တောင်သူတို့ အဆင်ပြေ ချောင်လည်မှ သုံးပုံနှစ်ပုံသော လက်လုပ် လက်စားတို့ ထမင်းဝနိုင်သည်။
ကျွန်မ စားနေသော စပျစ်သီးအရည်ကို မမျိုနိုင်ပဲ လည်ချောင်းထဲတွင် နင်နေ၏။ မနက်က ဦးကြီးစံပေါတို့ အိမ်ရှေ့ရှိ မီးဖိုတွင် ပဲစိမ်းငုံရိုးကို ထင်းလုပ်ပြီး ဆန်ပြုတ်အိုးကြီး တည်နေတာ မြင်ယောင်မိ၏။ မိုးငွေ့နှင့် ထိုင်းနေသော ပဲစိမ်းငုံထင်းကို မီးတောက်စေရန် ကုန်းမှုတ်ရင်း မီးခိုးမွှန်လို့် မျက်ရည်ကျသလိုလိုနှင့် ကျိတ်ငိုနေသော ဒေါ်ကြီးခင်အေး မျက်နှာကို မမေ့နိုင်။
“သမီးရယ် ထမင်းတစ်လုပ် အတွက်များ ဟင်းငုတ်ပွင့် ကောက်ရောင်းတောင် မငတ်နိုင်ပါဘူး”
ရိုးသာဖို့ အမှန်တရားဘက်မှ ရဲရဲရပ်တည်တတ်ဖို့ ဖေဖေ ဆုံးမခဲ့ဖူးသော စကားတစ်ခွန်းကို သတိရမိ၏။ ခုတော့ ဟင်းငုတ်ပင်ကြီးလဲ ရွာတည်ဖို့ ခုတ်ပစ် လိုက်တော့ ငတ်ကုန်ကြပြီ ဖေဖေရေ ဟုသာ ဆိုရတော့မည်။
ဥပုဒ်သည်တို့ စကားဝိုင်းမှာ ဝါတွင်းထမင်း အကြောင်းပြောရင်း ခြောက်ခြောက် သွေ့သွေ့ နိဂုံးချုပ်လေ၏။
ကျွတ်ကျွတ်အိပ်အတွင်းမှ စိပ်ပုတီးကို ထုတ်ယူရင်း
“အမေကတော့ ခေတ်ကြီး ကောင်းတာ မြင်ပြီးမှ သေပါရစေလို့ အမြဲ ဆုတောင်း ပါတယ်အေ”
ဟု ပြောပြီးနောက် အမေကြီးရွှေသည် ခါးကိုင်းကိုင်းနှင့် စင်င်္ကြန် လျှောက်ရင်း ပုတီးစိပ်လေ၏။
ကျွန်မ သည်လည်း ဂြိုလ်ပြေ ရန်ပြေ စေတီဘက် ထွက်လာခဲ့ပြီး ဝင်သက် ထွက်သက် မှတ် နေတော့၏။ နှာသီးဖျားတွင် အာရုံကို စုရင်းမှ တစ်ချက်တစ်ချက် ဟင်းငုတ်ပင်ကြီး ပြန်ရှင်လာရင်တော့ ရိုးသားတဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှု့နဲ့ ထမင်းဝနိုင်မှာပါ ဟု ဖြေတွေး တွေးမိ၏။ သို့သော် အမြစ်ကို ဘူရိုဇာနှင့် ကော်လှဲခံရသော ဟင်းငုတ်ပင်ကြီး၏ ယခင်ရှိဖူးသော နေရာကိုပင် ရှာတွေ့ဖို့ ခက်ခဲလေပြီ။
မိုးမှန်ရင်၊ အိတ်စပို့ လိုင်းဖွင့်ရင်၊ ဝါတွင်းမှာ ထမင်းစားနိုင်ကြရင် . . . . . .. .. ..စိတ်တို့က ပြေးလေရာ
အင်း အရာရာဟာ အနိစ္စသဘော ဆောင်တာပါပဲ ဟု သာ၊ ရှစ်ပါးသီလ လုံရာလုံကြောင်း တရားကို သာ၊ တိုး၍ နှလုံးသွင်းရ လေတော့သည်။ ။
Posted by မေအောင် at 7:00 PM Links to this post 10 comments
ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောဖြစ်တာတွေကို အပျော်ရေးချင်လို့ပါ။ အခုပြောချင်တာက အခေါ်အဝေါ် ကိစ္စ။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူကြားက အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း ဆိုတော့ ချစ်သူရည်းစားတွေကြားက အခေါ်အဝေါ်တွေရယ်၊ ကျနော်တို့ လေ့လာမိသလောက် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုတွေခေါ်ဝေါ်ကြသလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ ခေါ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာကို ပြောချင်လို့ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေက ဖွတယ်ထင်လည်း ဖွတယ်ပေါ့။ ပျော်စေ ရွှင်စေ ရေးထားတာဆိုတော့ စိတ်ဆိုးသွားတောင် ပြုံးပြုံးလေး စိတ်ဆိုးပေါ့နော။
ချစ်သူရည်စားရယ် ဖြစ်လာကြရင် အခေါ်အဝေါ်ကိစ္စက ပေါ်လာပြီ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းကြမှာတုန်း။ အရင်က သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးဘဝတုန်းက "ဟေ့ကောင်၊ ဒါကဘယ်လိုလဲကွ"ဆိုတာတွေတောင် "မောင်ရေ ဒါလေးက ဘယ်လိုလေးလဲဟင်"တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာမဟုတ်လား။ "ချစ်ရေ ဒါလေးက ဒီလိုလေ" ဆိုတဲ့ "ချစ်"ဆိုတဲ့ နေရာမှာတောင် ကလေးကတည်းက ခေါ်နေကြ နာမည်အရင်းကြီးသုံးရင် အချစ်ပါဝါ လျော့တယ်ထင်ပြီး မသုံးရက် မခေါ်ရက်ကြပါဘူး။
နောက်တဆက်တည်း ပြောချင်တာက အသက်တွေကြီးလာမှပဲ ချစ်သူရည်းစားရတော့ စကားတွေတောင် မပီတော့တဲ့ ကိစ္စ။ ဒီကိစ္စက ရီလည်းရီရတယ်။ စာတွေရိုက်ပြောရင်းနဲ့ တကယ်ပြောတော့ ပါးစပ်တွေကပါ အကျင့်ပါလာပြီး ပြောကုန်ကြတာ။ " တုဂိုလေ ဒီဂ ချိတ်ချိုးနေတာ တိရဲ့ရား" လို့ မိန်းကလေးက ပြောရင် ယောက်ကျားလေးလုပ်သူကလည်း ပြန်ပြောလိုက်ပုံက "တိတယ်ရေ ချိတ်ချိုးနဲ့နော် အချိုးလေး" တဲ့။ မွေးလာမယ့်ကလေး ဂျကားဘယ်လိုလုပ် ပီတော့မှာလဲ နောဗျာ။
နောက်ဖြစ်လေ့ရှိတာတခုက ဒီလို၊ သမီးရည်းစား ဖုန်းပြောတာက အိမ်နဲ့ ဖုန်းပြောတာထက်က ပိုများတယ်။ ဖုန်းပြောတော့လည်း "ငါက ဒီလိုဆိုလိုတာလေ" လို့ အူတွေ အသည်းတွေတုန်အောင် ချစ်ရတဲ့သူကို ဘယ်ပြောရက်ပါ့မလဲ။ "ချစ်ရဲ့ မောင်က ဒီလိုဆိုလိုတာလေ" လို့ပြောတာပေါ့။ အဲ ဖုန်းချကာနီးရင် "မွမ်း..မွမ်း..မွမ်း" ဆိုပြီး အနမ်းပန်းတွေက ဝေကြသေးတာကလား။ ပြဿနာက ဘယ်မှာသွားတက်ကြတာလဲဆိုတော့ အိမ်က မိဘနဲ့ဖုန်းပြောရင် တက်တော့တာပဲ။ ယောက်ကျားလေးတွေဆိုရင် "အမေရေ ကျနော်ကလေ" အစား "အမေရေ မောင်ကလေ.." တွေဖြစ်လို့ဖြစ်၊ " မေမေရေ ကိုကလေ" ဖြစ်လို့ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဆိုရင်လည်း "ဖေဖေရေ သမီးကလေ" အစား "ဖေဖေရေ ချစ်ကလေ" တွေဖြစ်လို့ဖြစ်နဲ့ ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်ပါရောလား။ ပြီးတော့မှ သတိထားမိပြီး ဘုရား ဘုရား မေမေ၊ဖေဖေ နားလျှံပြီး မကြားကြပါစေနဲ့ စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းကြရတတ်တယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကဦးမလဲ ဖုန်းချကာနီးရင် "မွမ်း..မွမ်း..မွမ်း" ဆိုတဲ့ အနမ်းပေးသံကြီး ပါးစပ်က မထွက်အောင် ထိန်းရတာက တစ်ဒုက္ခ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တခါက ပြောဖူးတာပါ။ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ရည်းစားကောင်မလေး ရပြီးကာစ။ အခေါ်အဝေါ်က မပြောင်းရသေးတဲ့ စပ်ကူးမက်ကူးကာလ။ ဒီတော့ ကောင်မလေးကို ပေးဖို့ စာထဲမှာ အခေါ်အဝေါ်ကိစ္စတွေ ရေးထားတာ။ တို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အခေါ်အဝေါ်လေးတွေက စပြီး ဆွေးနွေးရအောင်ဆိုပြီး အစချီပြီး စာကိုရေးထားသတဲ့။ ဒါကို စာရေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်း အပြင်သွားတုန်း ကျနော့်ကို ပြောပြတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းတစုက ခိုးဖတ်၊ သူငယ်ချင်းပြန်လာတော့ သူ့ကိုလှည့်လည်း မကြည့်ဘူး။ အချင်ချင်းတွေ ပြောနေကြတာ၊ အေး သူငယ်ချင်းတို့ တို့တွေလည်း ပေါင်းသင်းလာတာကြာပြီဆိုတော့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ ဆွေးနွေးကြရအောင်လို့လည်း ပြောလိုက်ရော၊ ဟိုကောင်က သူ့စာတော့ ခိုးဖတ်ခံရပြီ၊ စောင်းအပြောခံရပြီဆိုတာ သိပြီး၊ ဒေါသတွေထွက် ဆဲဆိုပြီး နောက်ကလုပ်လိုက်လို့ ထွက်ပြေးကြရသတဲ့။
အခုကျနော်တို့ လေ့လာသိရှိထားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေ စာရင်းပြစုကြည့်ရအောင်။
အသက်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးကို ကြိုက်မိတော့ အသက်ငယ်ကောင်မလေးက အသက်ကြီးကောင်လေးများအား ခေါ်ဆိုကြပုံများ
(မွေးတဲ့နှစ်က အတူလောက်ကို လပိုင်းလောက်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးအား အများအားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်တတ်သည်။)
(၁-နှစ် ၂-နှစ်လောက် ငယ်သောမိန်းကလေးမှ ယောက်ကျားလေးကိုခေါ်တတ်သည်။)
(သိသိသာသာ အသက်ကြီးသူ ယောက်ကျားလေးအား အသက်ငယ်သူ မိန်းကလေးမှ ခေါ်ဆိုတတ်သည်။)
မိမိကောင်လေးနဲ့ ယှဉ်လျှင် အသက်အနည်းငယ်ကြီးသော မိန်းကလေးမှ ကောင်လေးအားခေါ်တွင်ပုံများ
("မောင်" လို့ခေါ်တာပါပဲ၊ အင်္ဂလိပ်လို စာရိုက်ရင် mg လို့ ရေးတတ်လို့ မောင်အတိုဟု သတ်မှတ်သည်။)
("မောင်"ကို maung ဟုရေးသားသုံနှုန်းတတ်၍ မောင်အရှည်ဟု သတ်မှတ်သည်။)
(မောင်အတို၊ မောင်အရှည်တွေ ဘယ်လိုသိတာတုန်းဟု ဆိုလျှင် သုသေသနပြုခံ တစ်ယောက် ချက်တင်တက်နေလျှင် သူ့နောက်မှ မသိမသာ ယောင်ပေပေဖြင့် စာခိုးဖတ်ခြင်း၊ သူ့ဖုန်းမက်ဆေ့များအား ခိုးဖတ်ခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သုသေသနပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။)
"မောင်"၊"ကို" ဆိုသည်များကိုလည်း အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ ကလေးကတည်းက ဝတ္ထုများဖတ်ရင်း၊ ငါချစ်သူရရင်တော့ ဒီလိုကို ခေါ်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီး ငယ်စဉ်က သဘောကျခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်များလည်း ရှိပါတယ်။ ယင်းသို့ခေါ်ဆိုကြသည်များကလည်း ကျနော်တို့ လေ့လာ သုသေသနပြုထားသည့်အထဲတွင် အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေက အဘယ်သို့သော ရလဒ်များရစေသနည်း။ ကျနော့်တို့ သူငယ်ချင်းအဝန်းအဝိုင်းထဲမှ တွေ့ရှိရသော သုသေသနပြုချက်များကို တင်ပြလိုက်လျှင် သင်သည်လည်း ချစ်သူရည်စားရလျှင် ဘယ်သို့ခေါ်တွင်ပါက မည်သို့ဖြစ်တတ်ပုံကို အနည်းငယ် ရိပ်စားမိသွားပေမယ်။
(သတိပေးချက် - ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပဒ်မရောက်ရာ။)
ဇယား(၁)- သုသေသနပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များ
(ဤဇယားကိုကြည့်လျှင် ပြတ်သွားသည့်ကိစ္စများတွင် မိန်းကလေးက စဖြတ်သည်ကများနေသည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။ သူငယ်ချင်းများ ရှက်နေမည်စိုးရိမ်သဖြင့် နာမည်ရင်းများ မေးခြင်းသည်းခံစေလိုပါသည်။)
နောက်ဆုံပိတ် သူငယ်ချင်း(၁၀)သည် အလွန်မှ လည်ဝယ်သောသူဖြစ်လေသည်။ သူသည် ရှေ့မှ သူငယ်ချင်းများအား အလွန်ရှည်ကြာစွာ လေ့လာပြီးမှသာ ချစ်သူရည်းစားထားလေသည်။ မိန်ကလေးထက် အသက်အရွယ်အားဖြင့် (၃)နှစ်ခန့်ကြီးသော်လည်း နောင်ရေးစိတ်အေးစေရန်အတွက် ကောင်မလေးအား သူ့ကို မောင်အရှည် အခေါ်ခိုင်းသော်လည်း၊ သူက မိန်းကလေးအား အနည်းငယ်ကြောက်ရပေသည်။ ရည်းစားနှင့်ပြတ်သွားသော ကျန်သူငယ်ချင်းများသည် နောက်ထပ်ချစ်သူအသစ်တွေ့သောအခါတွင် မောင်အရှည်သာခေါ်တွင်စေရမည်ဟု ကျုံးဝါးထားလေသည်။ ချစ်သူရှာချိန်၊ ကြိုးစားနေချိန်တွင်မှာပင် ရည်စားစာရေးရာ၌ မောင်အရှည်ခေါ်စေချင်သည့် အရိပ်အရောင်များသန်းနေစေရန် ချစ်သဝဏ်လွှာစာကို ကြိုးစားရေးမည်ဟု သူငယ်ချင်းတချို့က ပါးစပ်မှ ထုတ်ဖော် ပြောသံကိုလည်း ကြားဖူးသည်။ မောင့်(maung)ကို ပြန်ချစ်ပါနော် ဆိုသော ချည်ပြီး တုတ်ပြီးသား အဖြေတောင်းနည်းကိုလည်း သုံးမည်ဟု စိတ်ကူးသူက စိတ်ကူးထားပြီးဖြစ်လေသည်။
ကျနော့်သည်လည်း ယင်းသုသေသနစာတမ်းကို တင်ပြရသည်မှာ ကြောက်တောက်တောက်နှင့်သာ တင်ပြရခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းတွင် ကျနော်၏နာမည်၊ မောင်အရှည်၊ မိန်ကလေးကို နိုင်သည်ဟု ထည့်ချင်သော်လည်း မဇနိအားကြောက်သဖြင့် စာရင်းတွင် ကျနော့်နာမည်အား ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်ကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်။ နောက်တချက် ကျနော် စိုးရိမ်မိသည်မှာ ရည်းစားထားရာတွင် ငါနိုင်အောင်၊ ငါဖြတ်ချင်ရင်ဖြတ်ထားလို့ရအောင် ဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလည်း အခုစာတမ်းအား ကိုးကား၍ အသုံးမချော်စေချင်ပါ။ ဤသုသေသနစာတမ်းအား ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ပံ့ပိုးလိုလျှင် ငါတို့ကဘယ်လိုခေါ်တာ နိုင်ရတယ်၊ ကြောက်ရတယ် စသည်ဖြင့် ကွန်မန့်တွင် ရေးသား၍ ကူညီစေလိုပါသည်။
Posted by ဇနိ at 1:12 AM Links to this post 23 comments
Posted by ဇနိ at 5:45 PM Links to this post 8 comments
Youtube က ဖိုင်(၃)ခု ကို ဒီနေ့တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော် အဲဒီဖိုင်တွေကို ကြည့်ဖူးတာ ကြာပါပြီ။ အဲဒါတွေကို ကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ မကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ကြည်ပြီးသားလူတွေလည်း ထပ်ကြည့်ပြီး ပြုံးရယ်လိုက်ပါဦး။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်ပါဦး။ တရုတ်ကျောင်းသား (၂)ယောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကလစ်တွေ ယူကျူ့မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ သဘောကျရင် ထပ်ရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။ အခုဟာက ကျနော်သဘောကျတဲ့ အပိုင်းတွေပဲ တင်ထားတာပါ။
Posted by ဇနိ at 11:48 AM Links to this post2comments
Posted by ဇနိ at 4:00 PM Links to this post 11 comments
ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားနှင့် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတို့မှအပ တရားနာကြားရခြင်းမရှိပဲ အကျွတ်တရားရသည်ဟူ၍ မရှိချေ။ မှန်သောအမြင် (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) ရရှိရန်အတွက် (၁) သစ္စာနှင့်လျော်သော (သစ္စာနုလောမိက) တရားကိုနာကြားခွင့်ရခြင်း၊ (၂) နှလုံးသွင်းမှန်ခြင်း (ယောနိသော မနသိကာရ) ဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါး လိုအပ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန်]
Posted by ဇနိ at 9:31 PM Links to this post4comments
Posted by ဇနိ at 2:42 PM Links to this post4comments
Posted by ဇနိ at 4:17 PM Links to this post9comments
ကာလိုမန်ပန်းခြံဆိုတာက ကျနော်တို့နေတဲ့ အဆောင်နားမှာပါပဲ။ လမ်းလျှောက်သွား နာရီဝက်ဆိုရောက်တာပါပဲ။ အဲဒီပန်းခြံကို မကြာခဏရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခြံအကြောင်းတော့ အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း သိသွားမှာပါ။ မော်စကိုမြို့မှာ ဒီလို စိမ်းစိမ်းစိုစို သစ်တောအုပ်ကြီးနဲ့ အလွန်ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ပန်းခြံရှိနေတာ အံ့သြစရာပါပဲ။ အဲသလိုပန်းခြံတွေ အခြားနေရာတွေမှာလည်း ရှိသေးတယ်။ သစ်တောပန်းခြံတွေလို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။ မှတ်မိသေးတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မော်စကိုကို စရောက်တော့ လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတာ၊ သူလေယာဉ်ပေါ်ကကြည့်နေတာတဲ့ သစ်တောအုပ်တော့ မနည်းပဲတဲ့၊ လေဆိပ်နဲ့ မော်စကိုမြို့က အတော်ဝေးသလားတဲ့။ အတော်ကြီး ဝေးလှတာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲသလိုပဲ ဒီမှာက သစ်ပင်တွေရှိပဲနေတာလား၊ မခုတ်လို့ကျန်နေတာလား၊ ခုတ်မရလို့ကျန်နေတာလား မသိပါဘူး။ ကျနော် ဗော်လဂါမြစ်ဘေးက အနားယူအပန်းဖြေစခန်းကို သွားနေတုန်းကလည်း မနက်လင်းလာရင် တောထဲ ရောက်သွားတော့တာပဲ။ လျှောက်သွား ဟိုရှာ ဒီရှာ၊ ဟိုသွား ဒီသွားပေါ့။ မြစ်ဘေးမှာ လှေတွေလည်းရှိတော့ လှေတွေလည်း စီးလိုက်၊ ရေးကူးလိုက် တောထဲသွားလိုက်နေတာပေါ့။ ဗော်လဂါမြစ်ဘေးမှာ ဗော့ဒကာနဲ့ သိပ်ဇိမ်ကျတာ ပြောရင်း သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် လွမ်းလာပြီ။ ဗော်လဂါမြစ်ကမ်းဘေး စခန်းပုံတွေတော့ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာသာကြည့်တော့ နက်ထဲရှာထားတာ။ အခုတော့ ကာလိုမန်ပန်းခြံက ဓာတ်ပုံတချို့ကြည့်ပါဦး။ အလှကြီးတွေတော့ ဟုတ်ပါဘူး။ အမှတ်တရပေါ့ စိမ်းစိမ်းလေးတွေမြင်ရလို့ မျက်စိအေးသွားလည်း နည်းတာမှတ်လို့နော။
ပန်းခြံက မော်စကိုမြစ်ဘေးမှာရှိတာ။ အဲသလို စိမ်းစိမ်းလေး၊ တောအုပ်ကလေးတွေနဲ့။
ဒီအဆောက်အဦးကြီးကတော့ သမိုင်းဝင်ဆိုလားပဲ၊ မနှစ်တုန်းကတော့ ပြင်နေတာ၊ အခုတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတယ်။
ဒါကတော့ ပန်းသီးပင်အုပ်တွေ။ အခုတော့ အသီးမရှိဘူး။ နောက်ကျရှိလာမယ်။ အဲဒီတော့လည်းသွားရသေးတာပေါ့၊ ပန်းသီးက အကောင်းစားမဟုတ်လို့လားဘာလာတော့ သိဘူး၊ သီးနေရင် ခူးစားချင်စားလို့ရတယ်။ ခူးပြီးသယ်သွားချင်ရင်လည်းရတယ်။
ဒီအသီးလေးနာမည်မေ့သွားပြီ၊ အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကိုမေးတော့ ပြောပြတယ်၊ စားလို့ရတယ်ဆိုလို့ စားကြည့်တာ မဆိုးဘူး အရသာက။(((နောက်တိုး - အသီးနာမည်ကိုပြန်သတိရလို့ရေးလိုက်တာ - ရုရှားလို вишня - အင်္ဂလိပ်လို cherry တဲ့။ ချယ်ရီကို အဲသလိုဆိုတာကို သိဘူး။ ဒီမှာ နီနီအလုံးလေးတွေက ပေါသကိုး။ ကိုယ်က အ တော့ မခွဲ၊မခြား၊ မသိဘူးပေါ့။)))
ဒါတွေကတော့ နှင်းဆီတွေထင်တယ် သေချာသိဘူး။
ဒါက ဘာအဆောက်အဦးလဲတော့ သိဘူး၊ အကောင်နှစ်ကောင် ရှေ့မှာ ကားကားကြီးနဲ့။ တို့ဆီက ဘုရားတွေ့ရှေ့မှာကြနေတာပဲ။ သူများ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ ကိုယ်လည်းရိုက်တာပေါ့နော။
ဓာတ်ပုံတွေမှာ ဒိတ်ကတရက်လွဲနေတယ် ချောတီး။
Мы из будущего. - ပေါ့။
အဓိပ္ပါယ်က We are from the future.
Posted by ဇနိ at 10:01 PM Links to this post 10 comments
Posted by ဇနိ at 1:17 AM Links to this post5comments
Posted by ဇနိ at 7:49 PM Links to this post 18 comments
Posted by ဇနိ at 1:56 PM Links to this post 19 comments